UMsunduzi uhlangabezana nezikhalo zabagibeli baseProfessor – Sivubela intuthuko Newspaper
UMsunduzi uhlangabezana nezikhalo zabagibeli baseProfessor
UMASIPALA waseMsunduzi eMgungundlovu ukusukumele ngokushesha ukukhala kwabagibeli abasenzisa irenki enkulu engaphansi kwezakhiwo zalo masipala iProfessor Nyembezi Building okuthe ngeledlule abagibeli bazithela phezu kwethantala ledamu ebelibangelwa ukuqhuma kwamapayipi amanzi asetshenziswa kuleli bhilidi.
Kuphoqeleke amatekisi ukuthi aphumele ngaphandle kwavaleka uBoshoff Street, Church Street noPietermaritz Street njengoba abanikazi bamatekisi belalele ngokushesha ukukhala kwabagibeli ebebala ukhasha ukungena erenki bethi kabawagqokile amadadla okungena emanzini. Kule renki ebizwa ngokuthi kuseMgodini kutholakala amatekisi aya eGoli, Mzimkhulu, Harding, Richmond nezinye izindawo ezakhele uMgungundlovu ezaziwa ngeGreater Edendale kuhlanganisa ne-Azalea.
Intatheli yeSivubela Intuthuko izibonele isiminyaminya ebesikule migwaqo ebalwe ngenhla yaleli dolobha njengoba amatekisi abephumile erenki kuminyene utshumo lapho kugitshelelwa khona. Abagibeli abakhulume naleli phephandaba bathe bekungekho lula ukungena erenki kulesiya simo samanzi abekhawula ngenhla kwamaqakala.
UVuyolwethu Mtikita waseMzimkhulu obezogibela amatekisi aya kwelakubo uthe kasiqali ukwenzeka lesi simo sokuthi kuphazamise amanzi kule renki. Ubonge ithimba likaMasipala waseMsunduzi elisukume ngokushesha ukuhlangabezana nezikhalo zabo bengabagibeli. “Siyabonga ukuthi isheshe yenziwa imizamo yokufika kwabalungisa amapayipi kodwa kube nokudideka kithina bagibeli njengoba sifice amatekisi echitheke yonke le migwaqo edlula lapha ngaserenki. Besifisa ukuthi umasipala okungenani kanye ngesonto uthumele ithimba lawo lizohlola isimo ukuze lokhu kuvuza kwamanzi kusheshe kubanjwe ngoba uma esemaningi kuphazamiseka izinto eziningi. Nathi bagibeli singagcina sesidlala izigebengu njengoba sisuke sihamba sibuza ukuthi ami ngakuphi amatekisi aya ngakithi,” usho kanje.
Okhulumela uMasipala waseMsunduzi uThobeka Mafumbatha ekhuluma nabezindaba eMgungundlovu uthe umasipala wabo usheshe wahlangabezana nokukhala kwabagibeli njengoba isimo siye salungiswa abuyela erenki namatekisi. Ubonge ithimba labo elisukume ngokushesha kuhlanganisa lezamanzi namaphoyisa omgwaqo abaye bangenelela lapho bebedingeka khona ukuze kungaphazamiseki idolobha ngesiminyaminya ebesidalwe ngukuvuza kwamapayipi kwaphuma nabantu erenki.
Ligcine elakwethembisa umphakathi iphephandaba
UNGQONGQOSHE OMUSHA NEZINHLELO EZETHEMBISAYO